လက်ဗ် ယဲ့ရှင် - ဝီကီပီးဒီးယား
လက်ဗ် အီဗန်းနိုဗစ်ချ် ယဲ့ရှင်
(1929-10-22)၂၂ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၂၉
မော်စကိုမြို့၊ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံ
၂၀ မတ်၊ ၁၉၉၀(1990-03-20) (အသက် ၆၀)
FC Dynamo Moscow ၃၂၆ (၀)
ဆိုဗိယက်ယူနီယံ ၇၄ (၀)
ဆိုဗီယက်ယူနီယံ အတွက် ယှဉ်ပြိုင်
အနိုင်ရသူ UEFA Euro 1960
Runner-up UEFA Euro 1964
လက်ဗ် အီဗန်းနိုဗစ်ချ် ယဲ့ရှင် (အင်္ဂလိပ်: Lev Ivanovich Yashin; ရုရှား: Лев Ива́нович Я́шин) သည် အမည်ပြောင်အားဖြင့် ပင့်ကူနက် (သို့) ကျားသစ်နက် ဟုထင်ရှားပြီး ဆိုဗိယက် ဘောလုံးသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အားကစားသမိုင်း၌ အကြီးအကျယ်ဆုံး ဂိုးဖမ်းသူအဖြစ် အများက သတ်မှတ်ယူဆကြသည်။ ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းခြင်း၊ နေရာယူမှန်ကန်ခြင်း၊ အရပ်အမောင်း၊ ရဲရင့်မှု၊ ဂိုးတိုင်ဝတွင် အဟန့်ကောင်းခြင်းနှင့် ခုန်ပြန်ကျော်လွှား တုံ့ပြန် ကာကွယ်မှုများကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ (ယခင်) ဆိုဗိယင်ယူနီယံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌတစ်လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယဲ့ရှင်သည် ခုခံကာကွယ်မှုအပိုင်း၌ ၎င်း၏အခွင့်အာဏာကို ကောင်းစွာ ပြဿနာယူစေခြင်းဖြင့် ဂိုးဖမ်းသူတစ်ဦး၏ အနေအထားကို တော်လှန်သည့်အတွက် ဂုဏ်ပြုမှုရရှိခဲ့လေသည်။  ရှေ့သို့တက်၍ ဖြတ်ပို့ဘောများကို ဖမ်းယူခြင်း၊ ဘောလုံးချီ၍ ရှေ့သို့လာနေသော တိုက်စစ်မှူးများကို ပြေးလွှားရင်ဆိုင်ခြင်းများပြုလုပ်သကဲ့သို့ ဂိုးသမားများ၏ ဂိုးပေါက်ဝတွင် မိနစ် (၉၀)လုံး ရပ်၍ စောင့်ကြပ်နေရစဉ် အသင့် ချက်ခြင်းတုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စောင့်စားလျှက် ဂိုးပေါက်ဝမှ အော်ဟစ်နေခြင်းများလည်း ဆောင်ရွက်တတ်သည်။ ၎င်း၏ ကစားမှုများသည် ၁၉၅၈ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် ကမ္ဘာအနှံ့က ပရိသတ်ကို မ​ေ့မရအောင် စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ကာ ထိုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားသည် နိုင်ငံတကာတွင် ပထမဆုံး ရုပ်သံလွှင်းခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ အပြင်ပန်အားဖြင့် အနက်ရောင်ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ဝတ်ဆင် (အမှန်တကယ်မှာ နက်ပြာခပ်ရင့်ရင့်) ထားသောကြောင့် အမည်ပြောင် 'ပင့်ကူနက်' ဟူ၍တွင်ကာ ထိုအမည်သည်လည်း ၎င်း၏ ရေပန်းစားမှုကို ပိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် လေးကြိမ်ပါဝင်ကစားခဲ့ရာ နှစ်ကာလများမှာ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၆၆ နှင့် ၁၉၇၀ တို့ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၂တွင် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား အိပ်မက်အသင်း၌ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၉၄တွင်လည်း ဖီဖာ သမိုင်းတစ်လျှောက်အသင်း၌ ၎င်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ၁၉၉၈တွင် ၂၀ရာစု၏ ကမ္ဘာ့အသင်းတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဖီဖာအဖွဲ့အရဆိုလျှင် ယဲ့ရှင်သည် အခြားသော ဂိုးသမားများထက် ပင်နယ်တီ (၁၅၀) ပို၍ ဖမ်းယူကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ကစားသမားသက်တမ်းအတွင်း ရှင်းထုတ်မှုပေါင်း (၂၇၀)ကျော် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကာ ၁၉၅၆ အိုလံပစ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲနှင့် ၁၉၆၀ ဥရောပဖလား (European Nations' Cup အခေါ်အဝေါ်ဖြင့် ကျင်းပ) တို့၌ ရွှေတံဆိပ်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၃တွင် ယဲ့ရှင်သည် ဘောလောန် ဒေါရ် (ရွှေဘောလုံး) ကိုရရှိခဲ့ပြီး ထိုဆုရသူများအနက် ပထမဆုံး ဂိုးသမားလည်း ဖြစ်ပေသည်။ IFFHS အဖွဲ့က ၂၀ရာစု၏ အကောင်းဆုံး ဂိုးဖမ်းသူအဖြစ် မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း ခံရသည်။
↑ Лев Иванович Яшин. (in Russian)။ academydinamo.ru။ 27 March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Black Panther: The greatest goalkeeper of all time"၊ 23 June 2018။
↑ ၃.၀ ၃.၁ “Bullet maker to Ballon d'Or: The man who reinvented goalkeeping”. BBC. Retrieved7June 2018
↑ Yashin, Lev Ivanovich.။ Encyclopædia Britannica Online။ 25 June 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ ၅.၄ "Yashin, the impregnable Spider".။ 28 November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ FIFA. Retrieved 23 November 2013
↑ ၆.၀ ၆.၁ Casillas names his top ten No1s။ UEFA.org (5 February 2010)။ 28 March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The path of the 'Panther'"၊ BBC News၊9April 2002။ 21 April 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ Lomas, Mark (29 April 2010) "Lev Yashin: Russian Revolutionary".။ 22 May 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ESPN. Retrieved 21 May 2014
↑ "Top World Cup goalkeepers"၊ 15 May 2010။ 16 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ""Panther" gegen "Spinne"" (in German)၊ FIFA၊ 12 May 2016။ 19 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 28 October 2017။
↑ "The greatest XI in the history of football... and there's no room for Ronaldo, Eusebio and Best"။. Daily Mail. Retrieved 23 November 2013
↑ Stokkermans, Karel။ IFFHS' Century Elections။ RSSSF။ 25 June 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လက်ဗ်_ယဲ့ရှင်&oldid=725948" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။